DEG-DEG: Xidigii Hore Ee Kooxaha Real Madrid, Man City & AC Milan Ee Robinho Oo Lagu Helay Danbi Kiis Kubsi Wadareed Uu Ka Qayb Galay Iyada Oo SAGAAL Sano Oo Xabsi Ah Lagu Xukumay. – WWW.Gool24.net
Xidigii hore ee kooxaha Real Madrid, Manchester City iyo AC Milan ee Robinho ayaa danbi culus lagu helay kadib markii maxkamada dalka Talyaanigu ay galabta soo saartay ku dhawaaqday in xidiga ree Brazil ee Robinho lagu helay kiis kubsi wadareed ah oo uu qayb ka ahaa. Ronaldo ayaa gadhka loo galiyay xukun sagaal sano ah markii lagu soo cadeeyay danbigan.
Robinho ayaa waqti fiican ku soo qaatay kooxaha Real Madrid, Manchester City iyo AC Milan si la mid ah xulka qarankiisa Brazil laakiin kiiska ay hadda maxakada Talyaanigu xukunkiisa soo saartay ayaa ah mid soo bilaamay January 22, 2013 kii markaas oo uu ka tirsanaa kooxda AC Milan.
Dhacdada xidiga ree Brazil ee Robinho lagu soo maxkamadeeyay ee ah mid waqti dheeri ka soo gudbay iyada oo isaga iyo shan nin oo kale lagu soo oogay danbi ah in ay si wadar ah u kubsadeen gabadh markaas 22 sano jir ahayd oo u dhalatay dalka Albania. Shanta nin ee kiiskan kula jiray Robinho ayaa iyagana danbiga lagu helay.
Inkasta oo ay maxkamada dalka Talyaanigu Robinho iyo shan nin oo kale ay ku xukantay min sagaal sano oo xabsi ah waxa uu hanaanka garsoorka Italy ogol yahay in ay heerar kala duwan rafcaan uga qadaan karaan iyada oo ilaa ay ku guuldaraysanaayan rafcaankooda aan lagu qasbi doonin in ay xasbiga galaan.
Dhaqan galka xukunka ay galabta soo saartay maxkamada Italy ee Robinho iyo shanta nin ee kale min sagaalka sano loogu xukumay ayaan la filin doonin inta laga ogaanayo haddii ay rafcaan qaadan doonaan iyo waliba natiijada ka soo bixi doonta kiiska rafcaanka ay qaataan.
Robinho ayaa hadda ka tirsan kooxda dalkiisa Brazil ee Atletico Mineiro. Robinho iyo shanta nin ee xukunka lagu wada riday ayaa kubsi wadareed ka gaystay Milanese disco oo ku yaal magaalada Milano waxayna ahayd January 22, 2013 markaas oo uu ka tirsanaa AC Milan.